ဒီမိုကရေစီ ဆိုရာမှာလည်း ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီ (Representative Democracy) ကို ပြောတာပါ။
ဒီလို ထင်ရှားအောင်ပြောရချင်း က ကွန်မြူနစ်တွေ ယုံကြည်တဲ့ ပါဝင်မှု ဒီမိုကရေစီ Participatory Democracy နဲ့ ကွဲပြားအောင်လို့ပါ။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်မှာ ၊ ဒီမိုကကရေစီ ဆိုတာနှင့် လွပ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိသော ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီ ကို ယျေဘူရ အားဖြင့် ဆိုသည်ပါ။
လစ်ဖရယ် အတွေးအခေါ် လွှမ်းမိုးမှု
Political Rights။ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုမှု
Social Liberalism က လူမှုရေး နဲ့ စီးပွားရေး တွေမှာ အစိုးရ က ၀င်အုပ်စီး ရုံမက Political Rights တွေကိုလည်း ပေးရမယ် ဆိုထားတော့ ရှိရှိသမျှ လူတွေက သူတို့ရဲ့ Rights တွေကို တောင်းဆိုကြတာပေါ့။ Labor Rights, Women Rights, Abortion Rights, Religious Rights, Immigration Rights, Minorities Rights, လူတိုင်း rights တွေကို တောင်းဆိုလာကြရော။ လူတိုင်းက အလကား လိုချင်ကြတယ်။ ဘယ်သူကမှ အနစ်နာ မခံချင်ကြဖူး။ ကြာတော့ အစိုးရက အားလုံးကို စောင့်ရှောက် ရမဲ့ ဘ၀ ရောက်လာရော။
ဒီလို လူတကာက Rights တွေ တောင်းဆိုလာတော့ Islamic တွေ အတွက် အကွက်တွေ့လာကြရော။
ဥရောပမှာ Immigration ပြဿနာ က တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်တဲ့ နေရာမှာ လိုအပ် တဲ့ အလုပ်သမားတွေ ကို ဖြည့်ရင်း နဲ့ မိမိတို့ စိုးမိုးအုပ်ချုပ် ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီ နိုင်ငံ က လူတွေကို လက်ခံ ခေါ်ရင်း လူဦးရေများ လာရာက ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှု ပါလာတော့ 9/11 အပြီးမှာ ပြဿနာပေါ်ကြတော့တာပဲ။ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေ ၊ Sikh ဘာသာဝင်တွေ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေက သူတို့ဘာသာ အချင်းချင်း စုဝေးကြပြီး သူတို့ ဘာသာရေး ဘုရားကျောင်း တွေကို တည်တောင်ကာ အေးအေးချမ်းချမ်း ကိုးကွယ် စုဝေးနေထိုင်ကြတယ်။ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တွေက မရဖူး။ သူတို့ရဲ့ ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု ကို အတင်း သွပ်သွင်း လာတော့တယ်။ စာရေးသူ တွေးရတာက တခြားဘာသာတွေက သူတို့ရဲ့ ဘာသာ အရင်းခံ ဂျမ်းဂန်တွေကို တခြားဘာသာ နဲ့ ရေးသားထားကြတာ။ ဥပမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုရင် ပါဋ္ဌိဘာသာ တတ်မှ ၊ ဘာသာရေး ပါလာတာနဲ့ ပါဋ္ဌိ စကားလုံးကြီး တွေပါလာရော။ ပြောပြန်ရင်လည်း ပါဋ္ဌိတွေပါလာတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အကြောင်းအရာကို ပဲ ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့ ဆွေးနွေးတာနဲ့ ပါဋ္ဌိ ကြီးတွေပါလာတယ်။ အကြောင်းအရာ အပြင် ၊ ဘာသာ အခက်အခဲ လာရှိတယ်။ ခရစ်ရန် ဆိုရင်လည်း Lost in Translation တွေရှိမှာပဲ။ ဒါ့အပြင် ၊ ဂျူး ဆိုရင် အမေ က ဂျူး ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ Bloodline ကြီးက လာခံနေပြန်တယ်။ အစ္စလမ်ရဲ့ ဦးတည်ချက် က (လွှမ်းမိုးမှု) ပဲ။ ဒါကြောင့် အစ္စလမ်က အားလုံး Arabic သင်ပဲ။ မိမိ native language ဗမာ ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ Urdu ၊ မတတ်ခင်မှာ ခလေးတွေကို ပလီ ခေါ်သွားပြီး Arabic သင်ပေးပြီး ဘာသာရေး ရိုက်သွင်း လိုက်တာပဲ။ Common Language နဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အစောကြီး (စ) သိ လိုက်တာဟာ (အာလာအရှင်မြတ်) ပဲ။ နောက် အစ္စလမ်က ဘာသာ ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက် က (ဘာသာ) ပြန့်ပွားရေး။ ဒါကြောင့် အစ္စလမ် က အစောကြီး ရန်ငါစည်း တားထားလိုက်ပြီ။ Believers နဲ့ Infidel ။ အမှန်က ဒါ Discrimination ပဲ။
ဘာသာတိုင်းဟာ (အကြောက်တရား) နဲ့ (ခြောက်) ပြီး လူတွေကို ထိန်းချုပ် ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာလည်း (ငရဲ) ဆိုတာရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ (ထာဝရ) မဟုတ်ဖူး။ ဖန်ဆင်းရှင် ကိုယုံတဲ့ ဘာသာတွေက နိဗ္ဗန်ရောက် ရင်လည်း (ထာဝရ) ၊ (ငရဲ) ရောက်လည်း ထာဝရ။ (ခြိမ်းခြောက်) မှုက ပြင်းထန်တယ်။ ဒါကြောင့် အစ္စလမ် ဟာ မိန်းမ တွေကို မတရား ဖိနှိပ် ထားတဲ့ ကြားက မိန်းမတွေ ဟာ (ရုန်း) မထွက် နိုင်ကြဖူး။ ဒီတော့ ဘာသာတွေ အားလုံးထဲမှာ အစ္စလမ်က Common Language အပြင် ၊ ငယ်ငယ် ကတည်းက Brain Washed လုပ်ထားပြီးသား။ ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေ နဲ့ မတူတာက Shria Law ၊ Islamic Banking ဆိုပြီး Total Control အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးသား ။ နောက် သောကြာနေ့မှာ ပလီ တက်ကြရတော့ (လူစု) ပြီးသား။ ဘာသာ ပြန့်ပွားရေး နဲ့ လွှမ်းမိုးရေး ကို အကွက်ချ ပြီးသား။ တခြားဘာသာ တွေက Traditionalist တွေများတယ်။ အဖေအမေ က ဘုရားသွားလို့ ၊ Church သွားလို့ ၊ Temple သွားတယ် ၊ ဒါကြောင့် မိရိုးဖလာ ဘာသာဝင် ဖြစ်ကြတာများ တယ်လို့ထင်မိတယ်။ ခရစ်ယာန် တွေကမှန်မှန် Sunday မှာ Church သွားရမယ် ဆိုတဲ့ ပညတ် ချက်ရှိသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ စိတ်ပါမှ သွား ဆိုတော့ (မှန်မှန်) ဘာသာရေး အတွက် အချိန်ပေးရတဲ့ (စနစ်) မရှိတော့ဖူး။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေက များပြီး ဘာသာကိုယ်နှိုက် က (ငါ) ဆိုတာကို (ဖြုတ်) ဖို့ ၊ (ငါ) ပြတ်မှ သံသရာက လွပ်နိုင်မှာကိုး ….
ခရစ်ယာန် တို့ ၊ အစ္စလမ် တို့ က (ငါ့) ဘာသာ ၊ (ငါ့) ဘုရား ၊ (ငါ့) တမာန်တော် ။ (ငါ့) ဘာသာ ပြန့်ပွားရေး ဆိုတဲ့ (ငါ) ကို Based လုပ်တာ။ (ငါ့) ဘာသာ အတွက်ဟေ့ ဆိုရင် နိဗ္ဗန် ရောက်ရင်လဲ (ထာဝရ) လေ။
Incentive ကလည်း ကြီးမားတယ်။ လူ့သဘာဝ နဲ့ လည်း (ပို) နီးတယ်။ Capitalism ဟာ ( greed ) ကို အခြေခံသလို အစ္စလမ် ဟာလည်း (ငါ) ကို အခြေခံ တော့ (တွန်းအား) ကောင်းနေပြီလေ။ လူတိုင်းဟာ (ငါ) ဆိုတဲ့ (Self) ပါလာရင် (incentive) ချင်း မတူ။ Motivation ချင်းမှ မတူတော့တာ။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ population growth ဟာ ပြဿနာ လာဖြစ်ရပေမဲ့ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံရောက်တော့ Immigrant ဘ၀မှာ ၊ ခလေးများတာဟာ (လက်နက်) လာဖြစ်တယ်။
တိုးတက်ပြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူငယ်တိုင်း ပညာသင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ တွေရှိတယ်။ ခလေးများလို့ အလုပ်မလုပ် နိုင်ရင် နိုင်ငံတော်က ကျွေးရမယ် ဆိုတဲ့ Welfare System ရှိတယ်။ ဒီတော့ Religious Rights ကို အကာအကွယ် ယူလိုက်တော့ ကိုယ်ကမွေး ၊ နိုင်ငံတော်ကကျွေး ၊ နဲ့ ဟန်ကိုကျလို့။ တချို့များ ခလေးမွေးစား နေကြတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ခလေးများတဲ့ သူတွေက အစိုးရပေးတဲ့အိမ်ကျဉ်းတယ်လို့ အော်ကြတော့ သန်းနဲ့ ချီတန်တဲ့ အိမ်တွေမှာအစိုးရ စရိတ်နဲ့ ဇိမ်ကြနေတဲ့ Immigrants တွေက အများကြီး။
Social Liberalism ဆိုတာ တကယ်တော့ Idealism လို့ခေါ်တဲ့ (စိတ်ကူးယဉ်) နိုင်ငံရေး သက်သက်ပါပဲ။
Social Liberalism က လူသား အားလုံးကို ( Human Rights) (မျက်စိ) နဲ့ ကြည့်ပြီး ( From Womb to Tomb) ဆိုတဲ့ (utopia) အသေးစားကို တည်ဆောက်ကြတယ်။ အမှန်က (၀ိုင်းလုပ် - ၀ိုင်းစား) ဆိုတဲ့ (စိတ်ဓါတ်) အားလုံးမှာ (ရှိရင်) အောင်မြင် နိုင်ပါတယ်။
ဒီ (စိတ်ဓါတ်) ရှိဖို့ က (Culture) နဲ့ ( Value System) လိုလာပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မှာ ဖွပ်ဖွပ်ကြေ ခဲ့တဲ့ ဂျပန် နဲ့ ဂျာမဏီ တို့ဟာ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာထိပ်တန်း နိုင်ငံတွေ ပြန်ဖြစ်လာကြသလဲ။
Discipline မှာ ဘယ်သူမှ သူတို့ကို မမှီကြဖူး။ (Value System) ကြောင့် ၀ရိယ မှာ လည်း မတူကြပြန်ဖူး။
သူတို့က မွေးကတည်း က စည်းကမ်းရှိရမယ် ဆိုတဲ့ (အသိ) ကို (သိ) လာခဲ့ကြတယ်။ အလုပ်ကို အလုပ်နဲတူအောင် လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အပြီးမှာ ပြာပုံကနေ ပြန်ထုထောင်လိုက်ကြတာ အနှစ် (၂၀) လည်းကြာရော ၊ ထိပ်တန်း စီးပွားရေး နိုင်င်ငံတွေ ပြန်ဖြစ်လာကြတယ်။ အတုယူ စရာ မကောင်းဖူးလား။ အင်္ဂလိပ်တွေ နေမ၀င်အင်ပါရာ တည်ဆောက် နိုင်တာလည်း စည်းကမ်း နဲ့ စနစ် ရှိလို့ပဲ။
ဒါတွေအားလုံးဟာ နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကလာကြတာ။ Culture က Value System ကိုဖေါ် ထုတ်ပေးတာလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ယူဆ နိုင်တယ်။ Culture ကိုဘယ်သူက လွှမ်းမိုးသလဲ။ ဘာသာရေးလေ။
စာရေးသူ အတွက်ကတော့ Honor Killing ဆိုတဲ့ အကျင့် ၊ အတွေးအခေါ် ဆိုတာ လူးသားမျက်စိ နဲ့ကြည့် ရင် အတော်အောက်တန်း ကျတဲ့ အတွေး အခေါ်တရပ်ပဲ။ (ငါ) ဆိုတဲ့ မာန အတွက် မိမိရင်သွေး တွေကို သတ်ဖြတ်တာဟာ လူမဆန်တာပဲ။ ပြီး ပါကစ္စတန် မှာ မိန်မတွေကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက် ၊ မီးရှို့ နှိပ်စက် တာဟာ မိန်မတွေကို သစ်ကုလားအုပ် (Camel) လောက်မှ တန်ဖိုး မထားတဲ့ အာရပ်ယဉ်ကျေးမှု ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘုရားလက်ထက် က အခုသတ်ဖြတ်မှု တွေနဲ့ နံမည်ကြီးနေတဲ့ ပါကစ္စတန်က Swat Valley ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ ၊ အလွန်အေးချမ်း တိုးတက်တဲ့ နယ်မြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အစ္စလမ်ဘာသာ လွှမ်းမိုးပြီး နောက်ပိုင်း အစိုးရက အုပ်စိုးလို့ မရနိုင်လောက် အောင် စိတ်ကြမ်း ၊ လူကြမ်း ၊ နဲ့ လူရမ်းကားကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ရပြီ။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် လူငယ်တစ်ယောက် က စာရေးသူကို အစ္စလမ်ဘာသာ အကြောင်းနားလည် အောင် သူတို့ရဲ့ ကိုရမ် ကျမ်းစာ ကိုဖတ်ကြည်ဖို့ တိုက်တွန်းလာဖူးတယ်။ အစ္စလမ်ဘာသာ ဟာ ဖန်ဆင်းရှင် Creator ကို ယုံကြည် တဲ့ဘာသာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖန်ဆင်းရှင်ပြောတာတွေ အားလုံးဟာ (လုံးဝအမှန်တရား) (Absolute truth) လို့ ယူဆကြတယ်။ ဒါ့ထက်ဆိုးတာ က (ငါ) တို့ဘုရားကို မထိနဲ့ ၊ (ငါ) တို့ဘာသာကို မစော်ကားနဲ့ ၊ (ငါ) တို့ဘာသာကိုပြောင်းမှ ..ဆိုတဲ့ (ငါ) လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အကြမ်းဖက်နည်း တွေဟာ ယနေ့ အစ္စလမ် ဘာသာကိုမောင်ပိုင်စီးထားတဲ့ ၂၁ခေတ် အစ္စလမ် လို့ ပြောနိုင်တဲ့ Wahhabism ရဲ့ အရင်းခံ လာဖြစ်တယ်။ ၀ါဟာဖီတွေ အတွက် ကိုရမ် ကျမ်း အဆိုဟာ (လုံးဝ) အမှန်တရားပဲ။ ပြဿနာက ကိုရမ် ကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ စာဖတ်သူရဲ့ Capacity ကျွမ်းကျင်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး နာလည်မှု ကွဲလွဲ နိုင်ကြတာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုရမ်ကျမ်းစာ အပေါ် ဘယ်သူ့ Interpretation ဆိုတာ က ပြဿနာ အရင်းခံ လာဖြစ်တယ်။ တနည်းပြောရရင် (တဆင့်ခံ) အမှန်တရားပဲ။ ဥပမာ ဘာသာရေးဆရာ Wahhabi ရဲ့ နားလည်မှု ၊ ဖြစ်ချင်မှု တွေဟာ ကိုရမ်ကျမ်း ကို အခြေခံ လိုက်တော့ Absolute Truth လာဖြစ်တယ်။ အမှန်က ဘုရား ကိုရှေ့က တင်ပြီး အကာအကွယ်ယူထားတဲ့ Wahhabi ရဲ့ (အတွေးအခါ်) တွေပဲ။ ဒီ (တဖက်စွန်း) အတွေးအခေါ်တွေ နောက်မှာ တဖက်စွန်း Value System တွေဟာ ကပ်ပါလာတယ်။
တရိစ္ဆာန်လေးတွေ လည်လှီးရင်း စိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်း ဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာ ကို Wahhabi နည်းလည်မှု နဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ မီးပုံထဲ (ရမ်း) (Gun Powder) ထဲ့ လိုက်သလိုပေါ့။
ဘာသာက Culture ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ Value System ကိုဖေါ်ထုတ် ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ ကိုသိစေချင်တာပါ။
အသက်ကြီးမှ ကိုရမ်ဖတ်ဖို့ အာရပ်ဗစ် သင်ရင် ( က ကာ ကိ ကီ ) အဆင့် နဲ့ ပါဋ္ဌိ ကိုဘယ်လိုဖတ်ပြီး နားလည် နိုင်မှာလဲ။ ကိုရမ် ဖတ်တာထက် အစ္စလမ် ဘာသာဝင် တွေရဲ့ အကျင့် အနေအထားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဘာသာရဲ့ ကျင့်စဉ် တွေကို လေ့လာ သိရှိ နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ဘာသာရဲ့ ညွှန်ကြားချက် အရ အသားကို မစားခင် မှာ တောင်ရက်ရက်စက်စက် လည်လှီးရတဲ့ အတွက် ဘာသာဝင် တွေဟာ စရိုက်ကိုက ကြမ်းတမ်း မကုန်ကြဖူးလား လို့ ငြင်းချက် မထုတ်နိုင်ဖူးလား။ (၆) ရာစု နှစ် အတွေးအခေါ်အရ ၊ ဒီအမူအကျင့် ကို လက္ခံနိုင်စရာ ရှိပေမဲ့ ၂၁ ရာစု နှစ် အတွေးအခေါ် ၊ Animal Rights အမြင်နဲ့ကြည့် ရင် ရက်စက်ရာမရောက်ဖူးလား။ Australia ကနွားတွေ အင်ဒိုနီးရှားကို တင်ပို့ခဲ့ရာ Australia နွားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လည်လှီးတဲ့ Documentary ကို Australia မှာပြခဲ့ရာ ရက်စက်လွန်းတယ် ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ကြလို့ အင်ဒိုနီးရှားကို Australia နွားတင်ဖို့မှု ကို ရပ်ခဲ့ရတယ်။ စာရေးသူ အမြင်အရ ။ လူဆိုတာ evolution အရ (အသိ) ဆိုတာ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာတယ်။ ၂၁ ရာစု (အသိ) နဲ့ (၆)ရာစု (အသိ) ဘယ်တူနိုင်ပါ့ မလဲ။ ၂၁ ရာစု မှာ (၆) ရာစု (အသိ) ကို အတင်း အဓမ္မ သွပ်သွင်းနေရင် (အ၀ိုင်း) ထဲ (လေးထောင့်) အတင်းထဲ့သလို ဖြစ်နေဦးမှာပဲ။
(ဂျူး) တွေက မိုဟာမက်ကို တမာန်တော် အနေနဲ့ လက်မခံ တာကြောင့် ကမ္ဘာ့ရန် လာဖြစ်ကြရပေမဲ့ ၊ Orthodox Jews တွေရဲ့ အဆုံးအမ တွေမှာ အစ္စလမ် နဲ့ တူတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဟာလာ အသားအစား ၊ ဂျူးတွေ က Kosher meat လို့ခေါ်တယ်။ လည်လှီးရတာချင်း လည်း ဆင်ဆင်ပဲ။ Sex နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညတ်ချက်တွေမှာ လည်း အတွေးခေါ်တွေက ခပ်ဆင်ဆင်တွေပဲ။ ကွာတာက ဂျုး တွေက ဘာသာရေးလွှမ်းမိုး မှု ကို မဦးအတည်တဲ့ အပြင် ၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ရဲ Chosen people လို့ယူဆတဲ့ အတွက် ဂျူး ဖြစ်မြောက်ဖို့ရာ ပညတ်ချက် တွေပါလာပြန်တယ်။ ဂျူး အားလုံသည်လည်း Orthodox ဂျူးတွေ မဟုတ်ကြ။ ဒါကြောင့် numbers game မှာ ဂျူး တွေ မနိုင်။ သို့သော် စာရေးသူ အမြင်အရ ဂျုး တွေကို ကမ္ဘာကြီး က (မွေး) ထားဖို့လိုပါတယ်။ ကြောင် ရှိရင် ကြွက် မလာသလိုပဲ ၊ ဂျူးတွေကို အာရပ် နဲ့ အစ္စလမ် တွေ မကျော်နိုင်ပါ။ ဂျူးတွေ တော်တာ ၊ ဂျူးတွေ အစွမ်းထက်တာတော့ မည်သူမှ မငြင်းနိုင်။ Quality ကို Quantity က မနိုင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
စာရေးသူ အတွက် အရေးကြီးတာ က ကိုရမ် ကျမ်းက ဘာပြောတယ် ဆိုတာထက် ၊ ကိုရမ်းကျမ်းကို အကာအကွယ်ယူ ပြီး ၊ ကျင်ကြံ နေထိုင်ကြတဲ့ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တွေ ရဲ့ (အမူအကျင့်) က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက ရလဒ် ကိုဖေါ်ပြနေသည် မဟုတ်ပါလား။ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်မှ သူတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက် ကို အထင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်။
Jihad ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွင်တွင် သုံးပြီး ဘာသာခြားတွေကို တကမ္ဘာလုံး လိုက်သတ်နေကြတာ ၊ Honor Killing အမူအကျင့်တွေ ၊ အဓမ္မနည်းနဲ့ ဘာသာဖြန့်တာတွေဟာ ၂၁ရာစု အတွေးအခေါ်နဲ့ လားလားမှ အံဝင်ခွင်ကျ တဲ့ အမူအကျင့်တွေ မဟုတ်ပါ။
စာရေးသူ မလေးရှားက အပြန် ၊ Thai Airways ပေါ် တက်လိုက်တာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုခြင်း ကွာတာကို ချင်ချင်း ခံစား လိုက်ရတယ်။ (စ၀ါဒီခ) ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ၊ လက်အုပ်ချီ နှုတ်ခွန်းသ ကြိုဆိုလျှက်။ ဗုဒ္ဓ ရဲ အေးချမ်းတဲ့ ၊ မေတ္တာ အဆုံအမ တွေဟာ ရောင်ပြန်လျှပ်လျှက် … အို …. ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။ နိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဟာ ဘာသာ အပေါ်မှီတာကို ချက်ချင်း ခံစား လိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာက တဆင့် လူမျိုးရေး လွှမ်းမိုးမှု ၊ ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှု အန္တရယ် ကို မြင်မိတဲ့ အတွက် ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိူး အဒွန့် ရှည်ရေး အတွက် အမုန်းခံ ရေးနေရတာပါ။
လစ်ဖရယ်အမြင် နဲ့ကြည့်ရင်တော့ ……..
လူတစ်ယောက် ရဲ့ အမြင် ဆိုတာ ထိုသူရဲ့ Capacity level အပေါ်မှာ (မူတည်) တယ်လို့ ထင်မြင်မိတယ်။